Aron Gunnarsson oo ka hadlay kadib markii oo Ronaldo u diiday funaanada bal maxa uu ka yiri xidigaan. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Aron Gunnarsson oo ka hadlay kadib markii oo Ronaldo u diiday funaanada bal maxa uu ka yiri xidigaan.
Aron Gunnarsson oo ka hadlay kadib markii oo Ronaldo u diiday funaanada bal maxa uu ka yiri xidigaan.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 18-06-16 8:04 AM Sida aanu shalay idiin soo gudbinay jariirada ree jarmal ee Blid ayaa si kulul u weerartay kabtanka Portugal Cristiano Ronaldo kuna tilmaamtay inuu yahay “Shaqsiga aduunka ugu kibirka badan” kadb markii ay sheegat inuu xidigaan si yasmo ah ula hadlay kabtanka ahna daafaca xulka Iceland Aron Gunnarsson oo weydiistay inuu maaliyada ka badasho.
The Blid ayaa qortay in Cristiano Ronaldo uu yiri markii maaliyadiisa la weydiistay “Inta aanan maaliyada kaa badalan adigu kumaa tahay ?” laakin Aron Gunnarsson ayaa qabtay shir saxaafadeed ka hor kulanka ay caawa la leeyihiin Hungry wuxuuna si faahfaahsan u sharaxay wixii dhexmaray isaga iyo dhigiisa Portugal.
Gunnarsson ayaa yiri “Waxaan maaliyada weydiistay Ronaldo kadib dhamaadkii ciyaarta waa run midaas, ima uusan weydiin cida aan ahay laakin wuxuu igu yiri dhib malaha aan tagno qolka labiska”.
“Waan ka daalay sheekada beenta ah ee ay qorayaan saxaafada waxaana diirada ku hayaa kulankeena xiga kamana fakaro wax hore u dhacay”